Areti-mifindra – Olona efatra, ka ankizy roa, matin’ny tsimok’aretina Sida - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Areti-mifindra – Olona efatra, ka ankizy roa, matin’ny tsimok’aretina Sida
Areti-mifindra mitarika ho amin’ny fahafatesana. Olona efatra samy mitondra ny tsimokaretina Vih/sida no namoy ny ainy, tao anatin’ny roa volana, araka ny loharanom-baovao eo anivon’ny ivon-toeram-pihainoana iray mandray an-tanana ny olana iainan’ny mararin’ny sida. Ny iray tany amin’ny faritra Menabe ary ny iray tany amin’ny faritra Atsinanana, ka ny roa amin’ireo no ankizy. Ny iray namoy ny ainy ny volana jona, raha nandritra ny volana jolay no nahafaty ny telo tamin’ireo. Nifanojo indrindra tamin’ny fotoana nisian’ny fiatoan’ny famatsiana ny fanafody Arv, fihinan’ny olona mitondra ny Vih ireo tranga ireo.
Nilaza anefa ny Dr Andrianjatovo Andrianiarizo, avy ao amin’ny fandaharan’asam-pirenena momba ny ady amin’ny sida fa tsy voatery hisy ifandraisany amin’ny tsy fisian’ny fanafody ny antony nahafaty ireo olona ireo.
“Maro ny tranga miseho amin’ny olona mitondra ny Vih. Arakaraka ny mampahery setra, izany hoe mampihetsiketsika ny marary no vao mainka mamparefo azy ihany koa. Mety ho avy amin’ny fahataran’ny fandraisana an-tanana ny marary, nefa koa mety ho avy amin’ny fisiana aretina hafa ao aminy, kanefa tsy voaray an-tanana no isan’ny mety ho antony iray ”, hoy ny fanazavany.
Voalaza ihany koa anefa fa ilay tranga tany Menabe ihany aloha hatramin’izao no efa voamarina teo anivon’iry sampan-draharaha iry. Nilaza ihany koa ny profesora Randria Mamy, tompon’andraikitra manam-pahaizana amin’ny aretina azo avy amin’ny tsimokaretina, fa sarotra ny hanamarinana ny anton’ireo tranga ireo ho avy amin’ny tsy nisian’ny fanafody Arv.
Efa miverina amin’ny laoniny kosa ny famatsiana ny fanafody Arv, rehefa niato nanomboka ny volana mey teo.
Vola sy serasera – Sehatra ahitana lalam-barotra ao anatin’ny dimy minitra(0)
Fanomezan-danja ny vehivavy. Hampiseho ny talentany sy ny fiofanana norantoviny nandritra ny fandaharan’asa Babeo, ireo vehivavy mpandraharaha madinika. Vehivavy mpian- tsehatra miisa 30 no hampi- ranty ny ezaka vitany mandritra ny telo andro, 23, 24, 25 mey, etsy amin’ ny Esplanade Analakely. «Foaraben’ny orinasa madinika» mihitsy no anarana hampitondraina ny hetsika mba hampaha- fantarana ny olona fa afaka mivelatra ny vehivavy na dia ao anatin’ny fahasahiranana aza. « Ho hita eny
Fahapoizinana – Olona 63 nararin’ny sakafo tamina mariazy miara-mizotra(0)
Nanao rano lava omaly ireo olona narary vokatry ny fahapoizinana ara-tsakafo tonga tetsy amin’ ny hopitaly Hjra, Ampefiloha. “Olona nanatrika mariazy miara-mizotra tamina fiangonana iray teny Itaosy ireo narary tonga nanatona hopitaly ireo. Olona an-jatony no nanatrika ny sakafo fanasana saingy ireo 63 ireo ihany no tonga nanatona hopitaly. Misy no nanatona toeram-pitsaboana hafa. Ankizy latsaky ny 15 taona avokoa ny ankamaroany tonga eto amin’ny Hjra », araka ny nambaran’ny Dr
VONONA NY LAZA ADINA Efa vonona avokoa na ny mpianatra na ny mpampi- anatra, hatramin’ny laza adina rehetra. Efa nahavita ny fandaharam-pianarana ny kilasy fahadimy hiatrika ny fanadinana Cepe amin’ ity taona ity. Nahavita izany na ireo avy amin’ny sekolim- panjakana na ny tsy miankina. Efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny famerenana ireo mpiadina. Ao anatin’ny fiatrehana ny fanadinana andrana ihany koa izy
Hasoavan-jazalahy – Tsy nisy fiakarany ny hasin-tanana amin’ny didim-poitra(0)
Manomboka ihany koa ny tsenan’ireo dokotera mpanao didim-poitra amin’izao ririnina izao. Tsy nisy fiakarana ny hasin-tanana alain’ireo dokotera amin’ ny fanaovana didim-poitra raha ampitahaina tamin’ ny taon-dasa. «Niezaka ny tsy hampiakatra ny saran’ny fandidiana izahay noho ny fahatsapana fa mbola ao anaty krizy ny Malagasy», hoy ny dokotera Randrianasolo Jules, mpanao io asa io. Etsy an-daniny anefa dia mirentirenty amin’ny alalan’ny peta-drindrina ny dokam-barotra ataon’ireo dokotera manao didim-poitra amin’ny
Fanadiovana – Nitombo be ny loto nameno tanàna taorian’ ny fety(0)
Tsy mahay mifety. Mbola lavitra antsika izany mifety ao anatin’ny fahadiovana izany raha ny fako sy ny loto hita omaly nandritra ny fanadiovana nataon’ ny avy amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua), taorian’ny fetin’ ny Pentekosta. Saika nahitana izany fako miavosa izany avokoa ireo toerana rehetra naha- vory olona saingy niavaka tamin’ireny ny teny amin’ ny faritra
Fahasalamana, SIDA, Mpanoratra Rijakely, 03.08.2012, 09:35	FIARAHAMONINA
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	Betroka – Olon-tsotra roa maty voatifitra, dahalo roa nodoran’ny fokonolona
Miandry baolina mitontona
Maevatanana – Kalachnikov iray sy bala 39 nentina tany anaty kitapo Malaza ratsy